We Fight We Win. -- " More than Media ": မိထီလာ မီးရှို့ခံရတဲ့ မူစလင် ပိုင်မြေများကို အစိုးရ က သိမ်းမည်ဟုဆို
မိထီလာ မီးရှို့ခံရတဲ့ မူစလင် ပိုင်မြေများကို အစိုးရ က သိမ်းမည်ဟုဆို
မီထီလာ မူစလင်ရပ်ကွက်မြေတွေကို အစုိုးရက သိမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
“တစ်အိမ်ကို ၅၃သိန်း၎သောင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ အိမ်ပေါင်း
တည်ဆောက်ပြီး သွပ်မိုးပါတဲ့ အလျား ၂၄ပေ အနံ ၁၈ပေ
အကျယ်ရှိတဲ့ အိမ်တွေ တည်ဆောက်ပေးမှာပါ။ မွေးစာရင်းရှိတဲ့
လူတွေကို ပေးမယ်” ဟု ဦးရဲမြင့် အောင်က ပြောကြားသည်။
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစဉ်က ပျက်စီးသွားသော ၊ မီးလောင်သွားသော
အိမ်များကို လုံခြုံရေးများနှင့် စောင့်ကြည့်ထားကြောင်း၊ အိမ်ပိုင်ရှင်များ
ကို ၎င်းတို့နှင့်သတ်ဆိုင်ရာ နေအိမ်များတွင် ၀င်ရောက်ရှာဖွေရန် ၂ရက်
ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သော အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ
အပျက်အစီးများကြားထဲတွင် တွေ့ရှိပါက ယူဆောင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
ရှာဖွေမှုများပြီးဆုံးပါက ထိုမြေနေရာများကို မြေထိုးစက်များဖြင့် ထိုးကာ အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်မည်ဖြစ်ကြောင်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်က ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
when did Moe Thee become Muslin?
ဒီသတင်း ထဲမှာ သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ စကားပါသလား ?
မ သေချာ မ ရေ ရာတဲ့ သတင်းကို လျှောက်ခေါင်းစဉ် တပ်ပြီး
Moe Thee lair.
Moe Thee Muslim.